How to Sell Cryptocurrency on Binance P2P (App)? - Burmese Edition | Binance Blog
How to Sell Cryptocurrency on Binance P2P (App)? - Burmese Edition
အဆင့်(၁) ၁)ပထမဦးဆုံး "Wallets" tab ကိုသွားပါ။ ၂) "P2P" ကိုနိပ်ပါ။ ၃) "Transfer"ကို နှိပ်ပီး မိမိရောင်းချင်တဲ့ crypto တွေကို P2P walletထဲသို့ပို့ပါ။ အကယ်၍ ရောင်းချင်သောcrypto များ P2P walletထဲ ရောက်ရှိနေပီးသားဖြစ်ပါက Homepage မှ တစ်ဆင့် "P2P Trading" ကို ၀င်ရောက်ပါ။
အဆင့် (၂) App အတွင်းရှိ Homepageမှ "P2P Trading" ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် P2P Trading page ထိပ်တွင်ရှိသော " sell" ကိုနှိပ်ပါ၊ ရောင်းလိုသော Coin အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ပါ(USDTကို ဥပမာအနေနဲ့ပြထားပါလိမ့်မည်) ထို့နောက် ကြော်ငြာတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပီး "Sell"ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့်(၃) ၁)ရောင်းလိုသောပမာဏကို ရိုက်ထည့်ပါ ၊ ၂) ငွေပေးချေစနစ်ကိုရွေးချယ်ပါ ပီးလျှင် "Sell USDT" ကိုနှိပ်၍ Order တစ်ခုတင်လိုက်ပါ။
အဆင့် (၄) ငွေလွှဲပြောင်းမှု စာမျက်နှာတွင် "Pending Payment" လို့ပြနေပါလိမ့်မည်။ ၀ယ်ယူသူ ငွေပေးချေပီးလျှင် "Confirm Receipt"လို့ပြပါလိမ့်မည်။ မိမိ၏ငွေပေးချေမှုစနစ်အကောင့်အတွင်းသို့ ၀ယ်ယူသူထံမှလွှဲလိုက်သော ငွေ၀င်မ၀င် အရင်စစ်ပါ။မိမိငွေပေးချေမှုစနစ် အကောင့်အတွင်းသို့ ၀ယ်ယူသူထံမှ ငွေလက်ခံရရှိပါက "Payment Receieved " ကိုနှိပ် ပီး "Confirm" ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် ၀ယ်ယူသူထံသို့ Cryptoများလွှဲပေးပါ။ အကယ်၍ ငွေပေးချေမှုစနစ်အကောင့်အတွင်းသို့ ငွေမရောက်ပါက Cryptoကို မလွှဲပေးပါနှင့် ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပါ။
မှတ်ချက် : အကယ်၍ ငွေလွှဲခြင်ဆောင်ရွက်ရာနေရာတွင် အခက်အခဲ တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက စာမျက်နာ၏ ညာဘက်ထိပ်ရှိ စကားပြောခလုတ်ကိုနှိပ်၍ ၀ယ်ယူသူနှင့်တိုက်ရိုက်စကားပြောနိုင်ပါသည် (သို့မဟုတ်) "Appeal"ကိုနှိပ်၍ Customer service ကိုအကူအညီတောင်းနိုင်ပါသည် ၊ Customer service မှ ယခုရောင်းနေသော order ကို ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။